Manchester City ayaa badisay
Manchester City ayaa 1-0 uga badisay xalay kooxda Brighton, iyadoo Phil Foden uu dhaliyay dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta halka Raheem Sterling uu rigoore qasaariyay daqiiqadii ugu dambeysay.
Guushan ayaa Man City u dhaqaajisay kaalinta saddexaad ee kala horreynta horyaalka, iyadoo hal dhibic oo keliya ka dambeysa Liverpool, iyadoo hal kulan u harsan yahay, taasoo fursad u siin karta inay Reds ku baacsadaan booska labaad.
Sikastaba, guushii Manchester City ayaa shaki la geliyay madaama goolka Foden uu kahoreeyay dhacdo dhex martay daafaca City Ruben Dias iyo Percy Tau.
Bilowgii magaalada ee Ruben Dias wuxuu ku dhammaaday Foden oo dhaliyay, laakiin goolka waxaa ka horreeyay qalad difaac oo uu sameeyay Tau.
Garsooraha Premier League Peter Walton, oo ka hadlaya isboortiga wuxuu yiri Ruben Dias wuxuu khalad ku yahay Tau, caqabada jirta ayaa ah in la qaato Manchester City taa bedelkeeda looga ogolaado in kulamada ay sii socdaan, laakiin HALKAN iyo qalad laftirkeeda lagu eegay garsoore Darren England ayaa kula taliyay inuusan goolka ka saarin qaladka.
Walton xalay, Walton wuxuu ka yiri: “Mid ka mid ah howlaha VAR waa in la hubiyo inaysan waxba dhicin ka hor goolka, oo ay ugu yeeraan ciyaarta ku saleysan weerar.
“Sida aan aragno, Dias wuxuu toogtay Tau waxayna ahayd taabasho, ma kubada ayuu gaadhay? Waa arin muran badan.”
Garsoorihii hore ayaa sidoo kale tilmaamay inay jiraan qaladaad muuqda oo ay sameysay VAR, isagoo tusaale u soo qaatay kaarka digniinta ee Luke Shaw ciyaartii Manchester United ay la ciyaartay Burnsley halkaas oo abaalmarin lagu siiyay ciyaaryahanka, kaasoo u qalma kaarka casaanka tooska ah. kaarka digniinta oo leh qalad lagu ogaado VAR.
the anguish from the body of workers at Andohatapenaka College Sanatorium